Heshiiskii Turkiga iyo Eu - BBC News Somali
Heshiiskii Turkiga iyo Eu
Heshiiskii Turkiga loogu ogolaan lahaa dal-ku-gal la'aan inay u safraan inta badan dalalka Midowga Yurub, ayaa haatan waxa uu wajahayaa khalkhal, xilli ay qasab tahay in Turkigu uu fuliyo shuruudaha ku xiran qodobada ganacsi ee Brussels iyo Ankara.
Qodobka uu dhibka ka taagan yahay, ayaa ah shuruucda argagixiso la dirirka, kaasi oo golaha Midowga Yurub uu leeyahay waxaa loo isticmaalaa in lagu maxkamadeeyo dadka dhaleeceeyo dowladda. Madaxweyne Erdogan, ayaa diiday inuu badelo shuruucdaasi. Waxaa sii socda dagaalka afka ah ee ka dhaxeeya Brussels iyo Ankara.
Madaxa Golaha Yurub, Jean-Claude Juncker, ayaa waxa uu weerar ku qaaday madaxweyne Erdogan, isagoo yiri haddii uu doorto inuu dadkiisa u diido xaqooda ah in ay si xor ah ugu safraan Yurub, waxaa qasab ah inuu sharaxaa middaas, waxa uuna intaa ku daray "taasi waa dhibaatadiisa ma ahan midayda."
Mr Erdogan, ayaa waxa uu Midowga Yurub ku eedeeyay in ay munaafaqad tahay in ay dalbadaan in Turkigu uu badelo sharcigiisa la dagaalanka argagixisada, isagoo jees jees ahaan u yiri "Midowga Yurub goormuu dalkan ka taliyay?"
Haddii heshiiska fisaha aanan la meelmarin, Turkigu waxa uu ku gooddinayaa in uu isaga bixi doono heshiiska uu ku aqbalay in muhaajiriinta looga soo celiyo Giriiga dalkooda la keeno.
Arrintaasi, ayaa waxa ay ka dhignaan kartaa in muhaajiriinta gaarayay jaziiradaha Giriigu ay sare u kacaan, kaddib markii ay aad hoos ugu dhaceen tan iyo markii uu Midowgu la heshiiyay Turkiga.
Brussels, ayaa waxa ay leedahay Turkigu waxa uu sharciga la dagaalanka argagixisada ku bannaysanayaa inuu howlgal ku fuliyo dadka dhaleeceeya dowladda, oo ay ku jiraan saxafiyiinta, taasina waa qasab in la badelaa haddii bay leeyihiin ay doonayaan inay helaan dal-ku-gal la'aan bilaash ah oo ay Turkidu ku tagto deegaanada Midowga Yurub ee uu ka shaqeeyo heshiiska Schengen.
Dowladda Turkiga, waxa ay ku doodaysaa in dalkeeda uu wajahayo dhowr khatar oo argagixiso, oo ay ka mid tahay kooxda hubeysan ee Kurdiyiinta PKK, kooxdaasi oo dhawaantan xafiis ka sameysatay caasimadda Biljamka, arrintaasi oo dabamartayn weyn u ah Ankara.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jarmalka, ayaa sheegay in kubaddu ay haatan la taal Turkiga. Hasayeeshee heshiiska oo dhan ayaaba khatar sii kordhaysa ku jira.